नेपालसँग कस्तो सम्बन्ध थियो सुष्मा स्वराजको ? | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
नेपालसँग कस्तो सम्बन्ध थियो सुष्मा स्वराजको ?
भारतीय पूर्व विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकालमा चारपटक नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । हिजो ह्रदयघातबाट मृत्यु भएकी स्वराजले २०७१ जेठ १२ गते विदेशमन्त्रीको सपथ लिएकी थिइन् । उनको आफ्नो कार्यकालको शुरुवातको दिनमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो तर पछिल्लो समय उनकै पहलमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुध्रिएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
उनले मन्त्रीमा सपथ लिएको दुई महिनापछि नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन् । २३ वर्षपछि हुन लागेको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकमा भाग लिने उनी २०७१ साउन ९ गते नेपाल आएकी थिइन् । उनले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमै भनेकी थिइन्, ‘नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा नेपाल उच्च स्थानमा रहेको छ ।’ उनले भनिन्– ‘१७ वर्षसम्म कुनै भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल गएनन् । २३ वर्षसम्म हाइ कमिसनको बैठक भएन । तर नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि १ वर्षमा उहाँ २ पटक नेपाल जानुभयो । उहाँ आएपछि नेपाल र भारतबीचको रोटी बेटी सम्बन्धलाई प्रवद्र्धन गर्न कुनै कसर बाँकी राखेको छैन ।’
त्यसपछि उनी दोस्रोपटक २०७२ असार १० गते नेपाल आएकी थिइन् । भूकम्पपछि नेपालले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन उनी नेपाल आएकी थिइन् । उनले दाता सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै भनेकी थिइन्, ‘आज म ‘हरेक नेपालीका आँसुु पुछ्ने’ तपाईको चाहनामा भारत सरकार, १ अर्ब २५ करोड भारतीय जनताको तर्फबाट र प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईहरुसँग काँधमा काँध मिलाएर यो विपत्ति पार लगाउने गहिरो प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछु ।’
त्यसपछि उनी तेस्रोपटक २०७४ साउन २६ गते बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को मन्त्रीस्तरीय बैठक सहभागी हुन नेपाल आएकी थिइन् । उनले त्यतिबेला पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् ।
चौथोपटक उनी २०७४ माघ १८ गते नेपाल आएकी थिइन् । नेपालमा तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भएपछि वाम गठबन्धन झण्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूत भएर नेपाल आएकी थिइन् । उनले विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै भनेकी थिइन्–‘मेरो भ्रमणको कुनै एजेन्डा छैन । म त दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउने साँस्कृतिक भ्रमणमा आएकी हुँ ।’
उनी त्यसबेला विशेषगरि वामगठबन्धनका नेताहरुलाई भेट्न नेपाल आएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री बन्न लागेका केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर नै प्रधानमन्त्री मोदीको बधाई सुनाउन आएकी उनले सुरुमै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग एक घण्टा भेटघाट गरेकी थिइन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्काली माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सल्लाहमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुष्मालाई नेपाल बोलाएका थिए ।
सोल्टी होटलमै वामगठबन्धनले रात्री भोज पनि दिएका थिए । भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा लगायत मधेशवादी दलका नेताहरुसँग पनि भेटघाट गरेकी थिइन् ।
समाचारनेपालसँग कस्तो सम्बन्ध थियो सुष्मा स्वराजको ?
विराटनगरमा प्रहरी कार्यालय नजिकै दुई वटा पसल चोरी